Ye-Mon's Personal Pages: Walk On
ဒီလူကြီးတော်တော်ဆိုးတယ်။ တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ဖတ်နေတုန်း မျှော်တဲ့… မြန်မြန် ဆက်ပြီးရေးပါဗျို့…
ဟုတ်ပါ့။ ကောင်းခန်းမှာ ဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ရွှေဂျမ်းအဖေလည်း Local Sierra Club member ပဲ။ နောက်ပိုင်းမှ မသွားနိုင်တော့တာ။ ဒါတောင် စိတ်မလျှော့ချင်သေးဘူး။
မျှော် နေပါတယ် ဗျို့ :P
အဖေ့ကို ဘလောက် လာဖတ်ခိုင်းပါလား။ သူလည်း ပိုးဝင်သွားအောင်။ :D
:D cheers to walking on and on and on...
ps:love the title!"walk on"...can have so so many meanings..yet..
i guess you got the point dilobear. :)
အဟိ .. “လွန်လေပြီးသောအခါ” ဆိုတဲ့ honest usage လေးကို ကြိုက်သဗျး)
ဒါနဲ့ ပေါင် ၅၀ ကျတဲ့အခါ ပြောပါဦး ။ ဘလောဂ့်မှာ celebration လုပ်ကြရအောင် အဟီ ။